Jailbreak iPad 2 miaraka amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Hatramin'ny namoahana ilay Jailbreak vaovao ho an'ny iOS 7, maro ireo mpampiasa nitaraina momba ny olana nanjo azy ireo tamin'ny fitaovana iPad 2 rehefa nanandrana nanao izany satria tsy nijanona ny famerenana amin'ny laoniny ny iPad raha tsy nahatratra fanjakana manokana. Miaraka amin'ny kinova vaovao an'ny evasi0n 1.0.2 dia voavaha ny olan'ny iPad 2.
Mba hahafahanao Jailbreak ny iPad 2 antsika, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mampifandray azy amin'ny iTunes mba hanaovana backup (raha sanatria tsy mahomby ny dingana iray) ary esory ny kaody fisakanana fidirana amin'ny iPad (raha misy izany).
Avy eo dia mila manaraka ireto dingana manaraka asehonay anao eto ambany ireto fotsiny ianao:
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia misintona evasi0n7 fanavaozana 1.0.2 miankina amin'ny solosaina izay hampiasaintsika: Mac o Windows.
Avy eo dia esorinay ny zotra amin'ilay rakitra ary mihazakazaka ny fampiharana izahay.
Mampifandray ny tariby izahay (azo inoana fa hisokatra amin'ity fotoana ity ny iTunes, manidy azy isika satria tsy ilaina io fizotrany io) Jailbreak.
Rehefa afaka minitra vitsy dia hiverina indray ny iPad.
Manokatra ny efijery an-trano izahay, mitady ny fampiharana fisorohana 0 ary kitiho eo.
Minitra vitsy aorian'izay dia hampahafantatra antsika ny fampiharana fa nahavita ny fizotran'ny Jailbreak. Tsindrio eo Fivoahana.
Niverina ny iPad ary dingana anatiny no hatao hamita ny fametrahana ny Jailbreak amin'ny fitaovantsika.
Vantany vao vita ny fizotrany, dia mitady ilay fangatahana antsoina izahay Cydia hiantohana ny fahombiazan'ny jailbreak.
Amin'ny fotoana voalohany ampiasantsika ny rindranasa Cydia dia hiseho ny efijery iray izay misy ny soratra hoeFanomanana ny rafitry ny rakitra”. Rehefa vita ny fampiharana dia hikatona. Izahay dia mihazakazaka indray ny rindranasa ary mifantina ny karazana fampiasana izay homenay azy: mpampiasa. Mety raha vantany vao mametraka ny Cydia isika dia manamarina raha misy fanavaozana azo atao, raha hanao izany dia hiroso toy izao manaraka izao:
Eo amin'ny faran'ny efijery dia mahita safidy maromaro isika, anisan'izany ilay tadiavintsika hoe fanovana.
Raha tsy misy ny miseho dia mitady ilay safidy izahay Reload, hita eo ankavia havia amin'ny efijery.
Avy eo ny fampiharana dia hampiseho amintsika ireo fanavaozana misy. Mila tsindrio fotsiny isika Fanavaozana fonosana tena ilaina.
Vonona ny hametraka ny Cydia Tweaks tianao izao ianao. Avy amin'ny Actualidad iPad dia asehonay anao isan-kerinandro ny Tweaks tsara indrindra ho an'ny iOS 7. Mila mahafantatra fotsiny ny tranokalanay ianao mba hampahafantarina anao ny momba ny vaovao sy ny fanavaozana ny Tweaks malaza sy malaza indrindra amin'ny tontolon'ny Jailbreak.
Fampahalalana misimisy kokoa - Evasi0n7: Jailbreaks sasany nianjera tamin'ny "Configuring System 2/2", Lisitry ny Cydia Tweaks mifanaraka amin'ny iOS 7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Jailbreak iPad 2 miaraka amin'ny iOS 7
Privado dia hoy izy:
iPad 2 iOS 7 miaraka amin'ny jailbreak 1.0.2 dia tsy manomboka raha lany bateria .. Tsy maintsy averina amin'ny laoniny satria tsy mandalo ny paoma.
Ny vondrona Evad3rs dia mamporisika ny hamonoana ny iPad hisorohana ny olana toy izany.
Eny efa fantatro izany, tiako holazaina fa raha vantany vao vita ny jailbreak raha lany ny bateria ny ipad dia tsy afaka manomboka intsony .. nosedraina indroa fotsiny fa kisendrasendra izany fa tsia. Mbola ao anaty beta izy ary tsy hametraka azy intsony aho mandra-pamoahana kinova hafa. MISAOTRA
Xulofuenla dia hoy izy:
Midika izany fa voafatotra ???? Mbola tsy nanandrana azy aho, miandry ny fanavaozan'ny xCon, azonao atao ve ny manamarina fa voafonja izany ???
Valiny tamin'i Xulofuenla
Ny jailbreak iOS 7 miaraka amin'i Evais0n7 dia tsy voalamina tanteraka… Inona koa, mametraka ny tweaks an'i Cydia aho izao ary manao famerenana miverimberina ary afaka miditra amin'ny Cydia indray.
Manamafy aho 100% fa ny jailbreak mankany amin'ny iOS 7 miaraka amin'ny Evasi0n dia tsy voalamina tanteraka.
Misaotra tamin'ny fanazavana, ka tsy azoko izay lazain'ny mpiara-miasa
Raha tsy voaroaka ilay izy nefa toa tsy mitovy ny famerenana miverina amin'ny famonoana azy irery..tsy misy bateria dia mahatonga ahy ho toy ny tadin'ny paoma ihany io ary tsy nitranga teo.
Ny ahy dia namono fotsiny tamin'ny lalao be dia be fa nivadika normal tsy nisy olana
Tsia, tsy voalamina io
Cesar Cruz Perez dia hoy izy:
Ny ipad 2 dia nohavaozina ho an'ny iOS 7 fa rehefa misintona cydia aho ary mampifandray ny ipad 2 dia milaza amiko izy fa tsy manohana ilay kinova, azonao atao ve ny milaza amiko izay azoko atao?
Valiny tamin'i Cesar cruz Pérez
Lance Tim Vour dia hoy izy:
mamporisika ny hanandrana azy ve ianao?
Valiny tamin'i Lance Tim Vour
Tonga lafatra amin'ny ipad 2 miaraka amin'ny iOS 7.0.4 aho
mpisandoka dia hoy izy:
Tena tsy maintsy nanoratra lahatsoratra hafa ve ianao mba hanazavana ilay zavatra mitovy indray?
Valiny amin'ny mpisandoka
Betsaka ny olona manana olana amin'ny Jailbreak ny iPad 2 azy ireo, tsy mino aho fa handratra ny hanokana lahatsoratra ho azy ireo.
Azavao fa izaho dia efa nametraka ifile ary nanao tweak hanafina ny Dock.
Fantatro fa mety miala tsiny amin'ny fanelingelenana izany, izao dia tadidiko fa hamafa ireo rakitra roa hita maso, izay an'ny jailbreak. Mieritreritra aho fa mahatadidy ny iray dia .log azo antoka fa izany no antony. Handinika izany aho.
Salama, mila fanampiana aho satria rehefa manomboka indray ny ipad 2 aoriako ny evasion7 dia tsy mandalo ny sakana izy ary tsy mandeha izany ary tsy eken'ny iTunes ny famerenana amin'ny laoniny, inona no azoko atao? Misaotra mialoha.
Ny zavatra mitovy amiko dia nitranga tamiko fotsiny, mila fanampiana aho.
Salama, manana iPad 2 aho, tsy te-hanavao ny iOS 7 satria nandre fanehoan-kevitra maro aho fa tsy mandeha tsara loatra amin'ity fitaovana ity izay mahatonga azy io miadana ary tsy misy fiainana bateria, misy olona afaka miteny amiko raha soso-kevitra na tsy hametraka ios7 amin'ny iPad 2 sy ny jailbreak?
Mamaly an'i Mig
Ny sarimiaina dia afaka manome anao ny fahatsapana ho miadana. Indraindray dia toa mihitsoka kely ihany, saingy mahalana. Ny fandidiana dia marina ary ny bateria, raha amboarinao tsara, dia hitovy ihany. Raha te-hampiorina azy io dia jereo ny vaovao ipad izay misy lahatsoratra milaza aminao ny fomba handefasana tsara ny ipad.
Nanao ny lahatsoratra tamin'ny ipad 2 aho araka ny hitanao amin'ny sary voalohany.
Jailbreaking izany dia soso-kevitra hatrany. Ny tsiranoka tsikelikely dia lasa mifanaraka amin'ny iOS 7.
Rava ny iPad 2 nataoko fony aho jailbreak Evasion 1.0.2 Tsy maintsy namerina indroa aho izao ... Tampoka teo dia tampoka ny efijery ary tsy afaka nanao n'inona n'inona aho, tsy azo ampiasaina ilay bokotra an-trano, tsy afaka miditra fotsiny aho ary miakatra ny volume ary manery ny bokotra eny. Vantany vao omeko, dia tapaka ny efijery ary mijanona eo izy. Ao amin'ny iTunes dia mbola manaiky azy ihany io fa tsy afaka mamadika azy aho raha tsy manery ny famerenana amin'ny laoniny.
Efa nitranga tamiko in-droa izany, tsy fantatro raha hifandray amin'ny zavatra navoakan'ny ekipa Evaders kinova beta io.
Manana iPad 2 amin'ny voalohany aho ary niasa tanteraka. Tsy maintsy manavao ny ios7 izy ireo mba hialana amin'ny olana. Ny vaovao farany evasi0n 7 dia mandeha tsy misy kilema. Natomboka indray in-3 ny ipad ary naharitra 5 minitra. Aorian'izany, apetraho izay takinao amin'ny olan'ny cydia 0. Nisalasala ny hanavao ny iOS 7 aho na hamela izany ao amin'ny ios 5.1.1 Ny marina, manombatombana ny toe-javatra dia tsara ny manavao satria ny ankamaroan'ny programa dia mila kinova nohavaozina. Azo antoka, misy kinova mifanentana nefa tsy nohavaozina. Raha te hanana lalao vaovao izy ireo dia hanana izany olana izany. Mikasika ny fampisehoana dia saika hitovy izy io, tototry ny ipad misy ny ios 5 aho izao, manidina izao. Vintana !.
Fa maninona no voafafa i cydia rehefa averiko ny backup?
Tsy maintsy averinao amin'ny laoniny ny nomaniny ho solon'izay alohan'ny famakiana azy
Tokony hiditra ao amin'ny 1.0.4 ve aho?
Doublet dia hoy izy:
Salama, manana ipad2 aho miaraka amin'ny ios 7.0.4 ary manaraka ny dingana rehetra aho, efa nanandrana imbetsaka ny namaky azy io ary na izany aza mijanona eo amin'ny sisiny ny ipad tsy azoko atao ny miasa. inona no mety ho vokatr'izany?
Mamaly an'i Doblet
Toy izany koa no mahazo ahy, ary matahotra aho fa tsy kisendrasendra izany.
Nacil Erunámo Yerniel Mirime dia hoy izy:
Salama, salama maraina, efa nanao ny JB tamin'ny iPad-ko aho ary salama tsara, manana fanontaniana fotsiny aho, rehefa any Cydia aho mametraka fonosana na zavatra hafa, misokatra irery ny AppStore miaraka amin'ny lalao Dragon City ary rehefa miverena any Cydia tsy maintsy ataoko indray fa raha misy antony dia mandany segondra vitsy aho hametrahana / hanamafisana, misokatra indray ny AppStore ary tantara tsy misy fiafarana izany, raha manana hevitra na sosokevitra ianao dia tena tiako izany. (Nanao ny dingana aho araka ny misy azy ireo ary ao amin'ny evasi0 ka tsy fantatro izay mety tsy nety: iOS 7.0.4)
Valiny tamin'i Nacil Erunámo Yerniel Mirime
Ampidiro ny NoAdStoreOpen avy amin'ny repo BigBoss ary hamboarina io.
May KinG dia hoy izy:
ny namako dia migadra ny ipad 4 -ko miaraka amin'ny ios 7.0.4 ary tsy mametraka Cydia misy olona afaka manampy ahy
Valiny tamin'i May KinG
Anita padilla dia hoy izy:
Salama! Andro tsara! Nanao JB tamin'ny ipad aho araka ny asehon'ireo dingana, saingy hita fa tsy misintona NA INDRINDRA! 🙁 Nahazo aho "azo ovaina ny endritsoratra, azafady ampidino indray ity" manandrana indray aho, saingy tsy nahomby. VONJEO !!!! Misaotra mialoha.
Valiny tamin'i Anita Padilla
Luis padilla, mpanao majia ianao, ny zavatra mitovy amiko no nanjo ahy, nisokatra tamiko ilay appstore cydia niaraka tamin'ny tanànan'ny dragona, ary saika natsipiko teny amin'ny rindrina ny iphone 5-ko satria narary aho.
voavaha ny app misaotra
Nicols Lazo dia hoy izy:
Ahoana ny famahana izany aorian'ny fametrahana azy dia mijanona ao anaty paoma hatrany hatrany izy?
Valiny tamin'i Nicols Lazo
Ny kinoviana notondroiko tao amin'ny lahatsoratra evasi0n7 1.0.2 no iray izay namaha ity olana ity tamin'ny iPad 2 sy ireo sasany izay nohavaozina tamin'ny alàlan'ny OTA. Raha nampiasainao ianao dia tokony handeha izany raha tsy misintona ny kinova evasi0n7 farany izay isa 1.0.4 http://evasi0n.com/, ampidiro ny maody DFU amin'ny iPad anao ary avereno aminy. Avy eo andramo indray ny jailbreak miaraka amin'ilay kinova farany azonao alaina.
mila misintona ny kinova 1.0.4 ianao dia mety tsara
Salama. Izaho dia manana iPad tonga amin'ny jailbreak evasion sy ios 7, fanavaozana farany. Ny olana ananako dia ny hoe Dead Trigger 2 dia handeha eo am-piandohana ary tsy hamela hilalao. Novakiako tao amin'ny forum iray ny olona iray izay namaha ny olany tamin'ny famerenako ireo toe-javatra. Ny olana dia nofafako Cydia sy ny fikajiana maro toa an'i Ifile vokatr'izany. Nanao ny jailbreak indray aho fa tsy niova. Izaho dia manana napetraka Ifanbox ary mitazona lalao eny foana aho, saingy te hanana Cydia indray aho. Inona no azoko atao? Misaotra anao mamaly
Ny zavatra tsara indrindra sy haingana indrindra dia ny fanaovanao backup amin'ny iPad (ny atiny tsy tena izy dia tsy adika), izay hamerenanao sy hamerenanao ny jailbreak hatramin'ny voalohany.
Lisavette dia hoy izy:
Salama, manana ipad 2 aho, misintona ny fanavaozana ny iOS 7 aho, adiny iray eo ho eo vao mamerina imbetsaka aho ary izao vao azoko rehefa mamono paoma aho ary avy eo mahazo ny sary famantarana iTunes miaraka amina plug azafady, mila fanampiana aho 🙁
Valiny tamin'i Lisavette
Hali dia hoy izy:
Salama, ahoana ny fivoahana ny kinova 1.0.5? Misy mahafantatra ny fomba fiasany amin'ny iPad 2 + 3g satria ny jailbreak ios 6 dia tsy nisambotra ahy tamin'ny tambajotra 3g, olona miasa ho azy na nanandrana hahafantatra raha mendrika ny hametrahana azy na tsia, misaotra betsaka anao momba ny pejy ao amin'ny pejy arahaba arahaba!
Mamaly an'i Hali
Ny iPad 2 izay nanaovako ny lesona dia ny maodely 3g, ary mandeha tsara izy io. Ny Version 1.0.5 dia tokony mbola hiasa tsy misy olana.
Azafady, 13 taona aho ary tsy dia mahalala firy momba an'io, fa tiako kosa ny manenjika ny iPad 2-gigabyte ipad 3 32g miaraka amin'ny ios 7.1 ary tsy haiko ny manao azy, afaka manao fivarotana solosaina ve izany ho ahy? POPR MBA misaotra haingana
Mampalahelo fa amin'ny iOS 7.1 amin'izao fotoana izao dia tsy afaka ary tsy ho tanteraka izany amin'ny ho avy. Mandra-pahatongan'ny famoahana ny iOS 8 dia azo antoka fa tsy hisy jailbreak intsony.
Ny kinova farany an'ny iOS izay mamela ny jailbreak dia 7.0.6.
Salama, manana ipad 2 aho ary hita eo amin'ny efijery ipad tsy mandeha intsony ny fifandraisana amin'i iTunes ahoana no fomba hiasako azy io satria tsy manana ny kaody manokatra aho
Scanner Pro, fampiharana mahafinaritra azonao atao maimaim-poana amin'ity herinandro ity